माधव सयपत्री - | Nagarik News - Nepal Republic Media
भाइबहिनी हो, हामी धेरै नेपालीहरूले मनाउँदै आएको चाड दसैं हाम्रो घरघरमा भित्रिसकेको छ। तपाईंहरूमध्ये कोही सहरमै हुनुहुन्छ होला। कोही गाउँमा जाँदै हुनुहोला। धेरै जना त गाउँमा पुगिसक्नुभयो होला। हजुरबाहजुरआमालाई भेटेर हालखबर सोध्नुभयो होला।
माधव सयपत्री १८ आश्विन २०७६ शनिबार ६ मिनेट पाठ
वि.सं. २०५८ को असारका सुरुका दिन छन्। दरबार हत्याकाण्डको भयानक दृश्य नेपालीका आँखामा ताजै छ। कतिपय मानिसका आँखा ओभाएका छैनन्। भलै राजसंस्था फरक–फरक कोणबाट आलोचना भए पनि राजा वीरेन्द्र जनताको मन–मनमा बस्न सफल भएका रहेछन्।
माधव सयपत्री २१ असार २०७६ शनिबार २२ मिनेट पाठ
भ्वाङ फेसन !
‘चिन्ताले चितामा पुर्‍याउँछ।’ धेरैले यसो भन्छन्। हुन पनि यस्तै हुँदो रहेछ। तनको रोगले भन्दा मनको रोगले छिट्टै गलाउँछ। मनका यस्तै रोगीहरू मात्रै चेकजाँचका लागि अस्पतालको त्यो कोठामा जान्छन्। देख्छु– कोही एकोहोरो भएर झुङिबसेका।
माधव सयपत्री २१ पुस २०७५ शनिबार १८ मिनेट पाठ
निलिमाको बाबा सहरमा जागिर खानुहुन्थ्यो। गाउँमा ६ कक्षा पास गरेपछि निलिमालाई बाबाले सहर लैजानुभयो। आमा पनि सँगै जानुभयो। बाबाले सहरको सुविधासम्पन्न स्कुलमा निलिमालाई कक्षा ७ मा भर्ना गरिदिनुभयो।
माधव सयपत्री २१ पुस २०७५ शनिबार १० मिनेट पाठ
रोशनी पाँच वर्षकी भइन् । उनी सहरमा कक्षा एकमा पढ्छिन् । वार्षिक परीक्षापछि केही दिन स्कुल विदा हुँदै थियो । छोरीको स्कुल बिदाको मौकामा बाबाआमा गाउँ जाने तयारी गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
माधव सयपत्री २ असार २०७५ शनिबार ११ मिनेट पाठ
सुटले निम्त्याएको असहजता
उसको आफ्नाे सुट नभएकोमा बेलाबेलामा ऊ अपमानित भएको थियो । यसबाट उसमा हीनभाव बढेको थियो । ऊ कल्पना गर्थ्याे , ‘मेरो पनि एकजोर गतिलो सुट भएको भए !’
माधव सयपत्री २९ जेष्ठ २०७५ मंगलबार २० मिनेट पाठ
माधव सयपत्री १७ चैत्र २०७४ शनिबार १४ मिनेट पाठ
कर्कीनी आमैको गोठमा गाईवस्तु कराइरहेका हुन्थे । ‘यी डाम्ना पनि कति कराउन सकेका ?’ आमै गाईवस्तुसितै बोल्थिन् । टाट्नामा बाख्राको समवेत स्वरले गोठ नै उचालिए झैं गर्थ्यो । जुठेल्नामा जूठा भाँडामा झिँगा भन्किरहेका हुन्थे । बिहानै ओखरको बोटमा आएर काग कर्कश स्वरले कराउँथे । एकछिनपछि एक हूल काग जुठा भाँडाको भात टिप्न आइपुग्थे । आमै फेरि कागसँगै कुरा गर्थिन्, ‘हा हा ! डाम्ना जतिले भाँडै उडाउने भए ।’
माधव सयपत्री १९ माघ २०७४ शुक्रबार १९ मिनेट पाठ
आनन्दराम आचार्यले सम्पत्तिप्रति बढ्ता मोह राखेन । त्यसैले जीवनका ५० वसन्त कटिसक्दा पनि उसलाई सम्पत्तिले पत्याएन । घरवरिपरि दुई रोपनीजति खेत र माथि लेकमा दुई हलजतिको बारी थियो । सकिनसकी लेकको बारीमा मकै, कोदो, फापर र आलुको खेती गर्ने गथ्र्यो आनन्दराम।
माधव सयपत्री १६ मंसिर २०७४ शनिबार ३० मिनेट पाठ
प्रशन्न मुद्रामा रुद्राक्षको मालाका गेडा गन्दै आधा घन्टा चुपचाप बस्नुहुन्थ्यो । अर्को १५ मिनेट सेता आँखा पल्टाएर ध्यान गर्नुहुन्थ्यो । त्यसपछि डमरु–घन्टा बजाएर ईश्वरभक्तिका अनेक गाथाको संगीतमय वाचन गर्नुहुन्थ्यो । गाला फुलाएर शंख फुक्नुहुन्थ्यो । लाग्थ्यो, त्यो शंखनादले घरका सारा अनिष्ट दूर हुन्थे । बिहान ७ बजे पूजाथान पसेको मान्छे, भात सेलाएर हिउँ बन्दा पनि हजुरबाको ‘भगवतभक्ति’ सकिँदैनथ्यो ।
माधव सयपत्री ११ कार्तिक २०७४ शनिबार २० मिनेट पाठ
पछि दुई–चारजना शिक्षक साथीले दुई–चार पटक पढे। खै कुनचाहिँ मूर्ख मनुवाले हो, 'मलामी' शीर्षकको कथाका कथाकार भाउपन्थीको नाम काटेर मसीले 'वामपन्थी' बनाइदिएछ। पछि हाँसो उठ्यो। पुस्तकका अरू ठाउँमा पनि केर्नसम्म केरेछन्।
माधव सयपत्री ३ भाद्र २०७४ शनिबार २२ मिनेट पाठ
कथा : मुनादिदी
एकाबिहानै गाउँमा ठूलै हल्लाखल्ला सुनियो । बाहिर निस्केर सुनेँ । अलिपरै हो जस्तो लाग्यो । छोरीहरू उठेका थिएनन् । श्रीमान् जागिरमा जानुभएको थियो । निकै ठूलो स्वरले कोही रोइरहेको थियो । कल्याङबल्याङले गर्दा निधो पाउन सकिनँ । गाउँमा ठूलै घटना घटेको शंका लाग्यो । यसो ढोका ढप्क्याएर घरमाथि बाटोमा आएँ । रुवाइ र हल्लाखल्ला मुनादिदीको घरतिरकै थियो । दलेदाइ हिजो मात्र सहरमा उपचार गरी आएका थिए । मैले दलेदाइ र मुनादिदीलाई साँझमा भेटेकी थिएँ।
माधव सयपत्री १३ जेष्ठ २०७४ शनिबार २६ मिनेट पाठ
मापदण्डअनुसारका घर तयार गरिसकेका र गर्न सुरु गरेका पीडितलाई राज्यले छिटोभन्दा छिटो अनुदान रकम दिँदा नयाँ घर बन्ने क्रम स्वतः बढ्छ। अनिमात्र पुनर्निर्माणले अभियानको रूप लिनसक्छ।
माधव सयपत्री ८ पुस २०७३ शुक्रबार १० मिनेट पाठ
उसले घरको मूलढोका खोल्यो । सधैँ आफूले गोडमेल गरेको बगैँचा र फुलेका पूmलहरू हेर्यो । फुलेको सेतो गुलाबको एउटा हाँगो लर्कायो । फूल मुसार्यो । र, अलिपर गयो । उसैले स्याहारेका कुकुरहरू चौरमा खेल्दै थिए । उसलाई तिन्को पनि कताकता माया लागेर आयो । खाना दिने बेला सधैँ बोलाउँथ्यो, ‘पप्पी ! डम्मी ! तिमीहरू यता आओ ।’ यो पटक बोलाएन तर कुकुर नै दौडिँदै उसको सर्टको फेर तान्न आइपुगे । आपूm त सुटुक्क निस्कँनु छँदै थियो, उसलाई आपूmसँगै कुकुर पनि निस्केलान् भन्ने डर थियो ।
माधव सयपत्री ४ मंसिर २०७३ शनिबार २३ मिनेट पाठ
पुनर्निर्माणमा स्थलगत समस्या
कतै एउटै घरका तीन–चार जनासम्मको नाम सूचीमा पर्नु र कतै भने भिन्न बसेकाहरूको पनि नाम नआउनुले सर्भे कति वैज्ञानिक र यथार्थपरक छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ।
माधव सयपत्री २१ भाद्र २०७३ मंगलबार ८ मिनेट पाठ
माधव सयपत्रीका अरु समाचारहरु खोज्नुहोस्